First ... 14 22 23 24 25 26 34 74 ... Last
Results 231 to 240 of 751
03-31-2012 02:34 AM #231
Thanked 823 Times in 37 Posts
'geJyywfoufvdkY uGsefawmfvnf;wdkif;xm;w,f...wdkifvdkufwJYpm udk wifcsifygw,f b,fvdkwif&rvJodcsifygw,f../
Originally Posted by ahteekyan
vGefcJYwJhvu todrf;cHvdkuf&wJh &efukefwdkif; ta&SY'*kHjrdKYe,frS 0efxrf;rsm;tm;csxm;ay;wJh ajruGufrsm; udwfpudk vGwfawmfrSm aqG;aEG;jujyD;oumv aemufqHk; rawmh xdktrdefYudk qdkif;iHhxm;vdkufajumif; vGwfawmftrwfwOD;qDu od&Sd&ygw,f
tpm;xdk;ajruGuf ay;Edkif&ifay; ray;Edkif&ifawmh vuf&Sdydkifqdkifxm;wJh0efxrf;rsm;qufvufydkifqdkifE dkifzdkY tcGifhta&;&SdvmEdkifonf [k ajymoGm;ygw,f
abacus04, barronbala, cannavaro, DoubleBase2008, fergusan, galladino, greenwood, honelay86, Incubuz, khit, KM Wai, ko too, kokoye, ktg, mahawgani, MNO.BN, myanmargunner, shadow69, skyblue199, THARGYII, THIHA, yankanar, yellowcolor
03-31-2012 02:57 AM #232
b@ma&;ESifhtcGef0efMuD;|me ? jynfwGif;tcGefrsm;OD;pD;|me uaexkwfa0wJh vpmacgif;pOfrS 0ifaiGtay:
0ifaiGcGef wGufcsufrSKerlemrsm;eJY vpmacgif;pOfrS 0ifaiGtwGuf ( oufomcGifhrsm;ESKwfjyD; ) 0ifaiGcGef pnf;Muyf&ef udef;aowGufjyD; 0ifaiGcGefESKef;rsm;Z,m;ukd az:jyvkdufygw,f /
( tcGefqkdif&mta&;MuD;wJhowif;jzpfwJhtwGuf jrefrmjynfrS owif;rsm; x&ufrSmyJwifvkdufygw,f ) /
badinf, barronbala, batoe, BH, blackcat13, cannavaro, complicatedcool, DoubleBase2008, fridayborn, galladino, greenwood, Hollinaz, honelay86, Incubuz, JoeJoule, justkidding, k-pooh, khit, KM Wai, Ko Khant, ko too, kokomg, kokoye, kotharbyaw, ktg, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, mrlynn, myanmargunner, PiNyat, Ravan, shadow69, THARGYII, THIHA, tiptop, Xeno, yankanar, yellowcolor, yokesoe, zelpha
04-01-2012 09:51 AM #233
- ကော့မှူးမြို့နယ် ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု မဲရုံအမှတ် ၁ တွင်NLD ၂၉၁ မဲပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၄၅ မဲ၊ ပယ်မဲ ၂ မဲဖြင့် ရေတွက်ပြီးစီးကာ NLD အနိုင်ရသွားသည်။ ရေကျော်ရွာတွင် မဲရုံ ငါးရုံရှိသည့်အနက် တစ်ရုံတွင် ရေတွက်ပြီးစီးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
- မကွေးမြို့နယ် ရွာ (၁၀)ရွာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ မဲအမျာစု ရရှိထားကြောင်း လတ်တလော သတင်း ရရှိထားသည်။
- မကွေးတိုင်း ကံပြားတိုက်နယ်ရှိ ပုထိုးစမ်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၂၅၀ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက ၈၉ မဲ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
- မကွေးတိုင်း စမ်းမကြီးအုပ်စုရှိ ကန်နီကျေးရွာတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၀မဲ ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၈၀ မဲ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
- တင်္နသာရီတိုင်း လောင်းလုံမြို့ မဲရုံ ၉ရုံတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၇၁၉ မဲ ရရှိပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
- ကလောမြို့နယ် အောင်ပန်း၊ ထနောင်း၊ ကမ်းပါးနီမဲရုံ၌ အမျိုသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၂၃၇ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီက ၁၇ မဲ၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၁၁ မဲနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်က ၅ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၃၀ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
- ဟဲဟိုးမြို့နယ် ကျောက်ပေါက်ရွာ မဲရုံတွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၁၀၉မဲ ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၅၇မဲ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်က ၂ မဲနှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီက ၁ မဲရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၁၈ မဲ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
- အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်(၃)တွင်ပါဝင်သည့် မိုင်းရယ်မြို့နယ် ၊ မဲရုံအမှတ်(၂) တပ်တွင်းတွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၄၃၆ ဦးအနက် ကြိုတင်မဲ ၂၆၀ ပါဝင်ရာ NLD တစ်မဲမှမရရှိဘဲ မဲရုံသို့ လာရောက်မဲပေးသော ၁၇၆ ဦးတွင် NLD က ၅ မဲသာ ရရှိခဲ့သည်။
- ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၃)နယ်မြေရှိ လားရှိုးမြို့နယ် ကျေးရွာ(၆)ရွာက မဲရုံ (၆)ရုံတွင် နေ့ခင်း(၃း၅၀)နာရီ ချိန်ထိ ကျားဖြူပါတီက အနိုင်ရထားကြောင်း အဆိုပါပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုင်းစံမင်းက ပြောဆိုသည်။
(Eleven Media Group News)
Last edited by batoe; 04-01-2012 at 09:57 AM.
adaptor, akm, AungDin, badinf, barronbala, cannavaro, Deadmanwalking, galladino, greenwood, Hollinaz, honelay86, Incubuz, k-pooh, KM Wai, kopaw, kosatsu, kotharbyaw, mahawgani, MNO.BN, mrlynn, myanmargunner, orjawlan, pyinthu, thuthuaung, yankanar, yellowcolor, yokesoe
04-01-2012 10:00 AM #234
သာစည်ရွာ၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၇၀ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက ၃၃ မဲ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီက ၁၄ မဲနှင့် ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ ပါတီက ၅ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၂၀ ရှိခဲ့ပါသည်။
သစ်ချိုကျေးရွာ၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၁၇၀မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၁၀ မဲ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီက ၄၁ မဲနှင့် ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ ပါတီက ၁၀ မဲ ရရှိထားပြီး ပယ်မဲ ၃၈ မဲရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နွားလပို့တောင်ကျေးရွာ၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၂၁၇ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၄၆ မဲ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီက ၅မဲနှင့် ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ ပါတီက ၃ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၄ မဲ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကြာသကန်ကျေးရွာ၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၁၀၄ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၈၉ မဲ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီက ၈၂ မဲနှင့် ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီက ၇မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၂၅ မဲရှိခဲ့ပါသည်။
ပျင်းပြင်ကျေးရွာ၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၁၆၇ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၅၃ မဲ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီက ၂၈ မဲနှင့် ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီက ၄ မဲရရှိခဲ့ကာ ပယ်မဲ ၄ မဲ ရှိခဲ့ပါသည်။
ခေါ်တောကျေးရွာ၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၃၁၅ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၇၃ မဲ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီက ၁၉ မဲနှင့် ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီက ၆ မဲရရှိခဲ့ကာ ပယ်မဲ ၁၃ မဲ ရှိခဲ့ပါသည်။
ကန့်ဘလူမြို့နယ် သကြားစက် မဲရုံတွင် NLD က ၁၃၇ မဲရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ၁၃၁ မဲ၊ တစည က ၁ မဲ၊ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီက ၄ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၁၄ မဲ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
adaptor, akm, AungDin, badinf, barronbala, cannavaro, Deadmanwalking, greenwood, Hollinaz, honelay86, Incubuz, JoeJoule, KM Wai, kopaw, kosatsu, kotharbyaw, mahawgani, MNO.BN, mrlynn, myanmargunner, pyinthu, sweetee, thuthuaung, yankanar, yellowcolor, yokesoe
04-01-2012 10:14 AM #235
AungDin, badinf, barronbala, cannavaro, galladino, greenwood, Hollinaz, honelay86, Incubuz, JoeJoule, KM Wai, kopaw, kosatsu, kotharbyaw, mahawgani, MNO.BN, mrlynn, myanmargunner, pyinthu, sweetee, thuthuaung, yankanar, yellowcolor, yokesoe
04-01-2012 10:21 AM #236
နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ရှိ တပ်ရင်း ၁၀၀၆ တပ်တွင်း မဲရုံတွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက အနိုင်ရရှိကြောင်း သိရသည်။
မဲပေးနိုင်သူ ၁၉၉ ယောက်ရှိသည့် ယင်းတပ်နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်-NLD က ၁ မဲ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီက ၁ မဲ၊ ပယ်မဲ ၁ မဲနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ၁၉၆ မဲဖြင့် အနိုင်ရ သွားသည်ဟု ယင်းမြို့နယ် NLD အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးဌေးဝင်းက ပြောသည်။
ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် တနေရာအတွက် NLD မှ ဦးမင်းသူ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးမှ ဦးလှသိန်းဆွေနှင့် တစညမှ ဦးကြည်မြင့်တို့ ၀င်ပြိုင်ကြသည်။
Burma Election 2012 News)
(7 days news )
ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်ရှိ ကျေးရွာ ၆၂ ရွာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ၂၅ ရွာ အနိုင်ရထားကြောင်း လတ်တလော သတင်းများအရ သိရသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်ရှိ သပြေကုန်းမဲရုံ (၁)၊ (၂)၊ (၃) တို့တွင် မဲများကို ယခုရေတွက်လျက်ရှိရာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက အနိုင်ရရှိလျက်ရှိနေပါသည်။
AungDin, badinf, barronbala, cannavaro, galladino, Grace, greenwood, Hollinaz, honelay86, Incubuz, JoeJoule, khit, KM Wai, kopaw, kosatsu, kotharbyaw, mahawgani, MNO.BN, mrlynn, myanmargunner, pyinthu, thuthuaung, yankanar, yellowcolor, yokesoe
04-01-2012 10:32 AM #237
ရန်ကုန်တိုင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၉ ရပ်ကွက်၊ မဲရုံ အမှတ် ၈ ၌ NLD ပါတီက ၁ မဲသာ ရရှိပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ၁၆၇ မဲ ရရှိသွားကြောင်း သိရ သည်။ ထိုမဲရုံ၌ မဲပေးမည့်သူ စာရင်းကုန်သွားပြီ ဖြစ်၍ မဲရုံ ပိတ်ကာ မဲများရေတွက်ပြီး ဟုသိရသည်။ အမှတ် ၈ မဲရုံ၌ မဲပေးနိုင်သူဦးရေ ၂၇၃ ဦးရှိသည့်အနက် ကြိုတင်မဲ ၁၁၀ မဲ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ၁၆၇ မဲ၊ ပယ်မဲ ၃ မဲ၊ NLD က ၁ မဲ နှင့် မြန်မာကွန် ရက် ပါတီမှ ၁ မဲတို့ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်အတွင်းရှိ သာယာအေးမဲရုံ (၁)တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၆၀၀ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၂၅ မဲနှင့် ပယ်မဲ ၁၇ မဲရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သာယာအေးမဲရုံ (၂)တွင်မူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၅၀၇ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၄၄ မဲနှင့် ပယ်မဲ ၅၇ မဲရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
adaptor, AungDin, badinf, barronbala, coolsnow, darkdemon, galladino, greenwood, happyvalley, Hollinaz, honelay86, Incubuz, JoeJoule, KM Wai, Ko Khant, ko too, kokokyaik, kopaw, kosatsu, kotharbyaw, mahawgani, MNO.BN, mrlynn, myanmargunner, phyo77, pwa236, pyinthu, shadow69, thuthuaung, Xeno, yankanar, yellowcolor, yokesoe
04-01-2012 10:38 AM #238
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်တွင် စုစုပေါင်း မဲရုံ ၁၈ ရုံရှိရာ မဲရေတွက်ပြီးစီးသွားသော မဲရုံ ၁၀ ရုံတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာမျိုးအောင် က အနိုင်ရရှိထားကြောင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တပ်နယ် ငါးနေရာ၌ မဲစာရင်း ၄၀၀ ကျော်တွင် NLD ပါတီမှ မဲအရေအတွက် ၂၀ ဖြင့် ရှူံးနိမ့် ကြောင်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့တွင် ကြိုတင်မဲအရေအတွက်မှာ ၃၅၀၉မဲ၊ အဝေးရောက် (ပြည်ပ)မဲမှာ ခုနစ်မဲရှိကြောင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်ရှိ မဲရုံ လေးရုံတွင် မဲရေတွက်မှု ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ရာ ယင်းမဲရုံလေးရုံတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိနေကြောင်း
ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ် တွင် ဆန္ဒမဲပေးမှုများ ပြီးစီးခဲ့ရာ မဲရေတွက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသာဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှ ဘုတ်တင် ကျေးရွာ မဲရုံ ( ၁ ) တွင် ၃၅၈ မဲ ( ၉၁ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း) ၊ မဲရုံ ( ၂ ) တွင် ၂၈၁ မဲ ( ၈၁ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း ) ၊ ကရင်စုကျေးရွာ မဲရုံတွင် ၂၃၈ မဲ ( ၈၇ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်း )၊ ပျားမွတ်ကျေးရွာတွင် ၂၀၃မဲ ၊ ရေတာရှည်တွင် ၃၆၁မဲ ( ၉၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း )၊ မြတ်ဆံနီ ကျေးရွာ တွင် ၁၅၁ မဲ ( ၆၈ ရာခိုင်နှုန်း ) ရရှိခဲ့ကြောင်း
adaptor, badinf, barronbala, BH, darkdemon, Deadmanwalking, galladino, greenwood, happyvalley, Hollinaz, honelay86, Incubuz, JoeJoule, k-pooh, khit, KM Wai, Ko Khant, ko too, kokokyaik, kopaw, kosatsu, kotharbyaw, ktg, mahawgani, MNO.BN, mokenlay, Mood, mrlynn, myanmargunner, Ngwe Zinyaw, phyo77, pwa236, pyinthu, shadow69, theinhtike84, weithet, Xeno, yankanar, yellowcolor, yokesoe
04-01-2012 11:09 AM #239
Noble Contributor Wizard Cupid will Never Surrender
Thanked 29,459 Times in 1,200 Posts
'Dreufapmapm (7)em&Davmuf tarpk &JY rJqE´e,f jzpfwJh aumhrSL;udka&mufcJhygw,f?
(31)&ufaeYnu aumhrSL;NrdKYe,f 0godcFaus;&GmrSm tarpk ntdyfcJhygw,f/
aumhrSL;NrdKYe,f refusnf;uefaus;&Gm rJ&Hk trSwf(2) yg/
yxr rJ&Hkudk tarpkvmr,fqdkNyD; apmifhqdkif;aeMu&if;u? 0godcFaetdrfrS &efukefudkwef;jyefr,f qdkwJh owif;&wmeJY iSufatmfprf; vrf;qHkzufudk usaemfwdkYtm;vHk; csDwufcJhMuygw,f/
iSufatmfprf; vrf;qHkrSm tarpkudkMudKqdkzdkYapmifhqdkif;aeMuwJhyHkyg/
tarpkeJY ,Ofwef;xGufvmcJhNyD;awmh apmifhMudKaeMuwJh jynfolvlxkeJY owif;axmufawGudk um;ay:rSae ESKwfquf ygw,f/
yifyef;aeayrJh NyHK;&TifaewJh tar? enf;enf;ydefoGm;w,f/
tJh'Duae tarpk &JY ,Ofwef; tpD; (100) cefY [m &efukefudk qufvufxGufcGmcJhNyD;
wuúodkvf&dyfomvrf;aetdrf ta&mufrSm tem;,laecJhNyD;?
naeydkif;rSm &Hk;csKyfwnf&m A[ef;jrdKYe,frS a&G;aumufyGJeJY ywfoufwJY aMujimcsufawG xkwfjyefr,fvdkY od&SdcJY&ygw,f/
uGefeuf&SifaMumifh Video Clip awGwifray;Edkifwmyg...
Last edited by kotharbyaw; 04-01-2012 at 11:21 AM. Reason: add IMG
adaptor, akm, badinf, barronbala, batoe, Botazan, Ceiko, coolsnow, darkdemon, Deadmanwalking, galladino, Grace, greenwood, happyvalley, Hollinaz, honelay86, Incubuz, JanJan, JoeJoule, KaungKinPyar, khit, KM Wai, Ko Khant, kokokyaik, kokomg, kopaw, KoSai11, ktg, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, mokenlay, Mood, Mr.Tha Khin Gyee, mrlynn, Ngwe Zinyaw, NyoMar, phyo77, pwa236, pyinthu, Sailing, san19682000, THARGYII, theinhtike84, thuraintun, thuthuaung, winhtaytse, Xeno, yankanar, yellowcolor, yokesoe, zzz
04-01-2012 11:17 AM #240
adaptor, akm, AungDin, badinf, barronbala, coolsnow, darkdemon, Deadmanwalking, galladino, greenwood, happyvalley, Hollinaz, honelay86, Incubuz, jackandjone, JoeJoule, khit, KM Wai, Ko Khant, ko too, kokokyaik, kopaw, kotharbyaw, ktg, mahawgani, mokenlay, Mr.Tha Khin Gyee, mrlynn, Ngwe Zinyaw, phyo77, pwa236, pyinthu, thawzin, theinhtike84, thuthuaung, Xeno, yankanar, yellowcolor, yokesoe